राजनीति Archives - Rajmarg Online
5Mar By Rajmarg OnlineNo Comments
दाङ, २१ फागुन । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँगको तीन बुँदे सहमति पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको सहमति हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले आफूहरु सरकारसँगको सहमति पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि उनले सहिदको सपना पूरा नहुन्जेल नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको भविष्यका लागि निरन्तर लागिरहने बताए । ‘सहिदको चाहना जनताको चाहना पूरा भएको छैन, जीवनदान गर्छौं, सहिदको सपना पूरा गरेर छाड्छौं ।’ विप्लवले सरकार र विप्लव पक्षबीच शुक्रबार भएको हस्ताक्षर समारोहमा सम्बोधन गर्दै यस सफलताका लागि दुवैतर्फलाई बधाई दिएका छन्। उनले नेपाल सरकार र आफ्नो पार्टी दुवैका तर्फबाट भूमिका खेल्ने सबैलाई पनि धन्यवाद दिएका छन्। ‘यस सहमति राज्य र नेकपाबीच मात्र होइन, यस स...
हिरासतबाट रिहा गर्न सरकारको सर्कुलर
दाङ, २१ फागुन। सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नेता–कार्यकर्तालाई आजसम्म हिरासतबाट रिहा गर्न सरकारले सर्कुलर गरेको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार साँझ पत्र लेखेर सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई विप्लवका नेता–कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सर्कुलर गरेको हो । मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दामा प्रक्रिया पु¥याएर छाड्न र अन्य मुद्दाको हकमा जिल्ला सरकारी वकिलसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रलायलका प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत चलेका करिब एक सय ७० जना विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई आजसम्म छाड्न सर्कुलर जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि काभ्रेमा हिरासतमा रहेका विप्लव समूहका तेस्रो वरीयताका नेता धमेन्द्र बास्तोलालाई पनि आजै रिहा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अदालतको आदेशपछि जे...
4Mar By Rajmarg OnlineNo Comments
दुइ वर्षको अवधिमा सल्यानमा ४० जना विप्लब कार्यकर्ता पक्राउ
दाङ, २० फागुन । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षमा सल्यानमा ४० जना विप्लब कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका छन् । दुइ वर्षको अवधिमा सल्यानका विभिन्न स्थानबाट १ महिला र ३९ जना पुरुष गरि ४० जना विप्लब कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । पक्राउ परेका मध्य १ जना हाल हिरासतमा रहेको र अदालतमा पेश गर्ने अन्तिम तयारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । अन्य कतिपयहरुको मुद्धा फैसा भइ सकेको र कतिपय धरौटीमा रिहा भइ सकेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो । हाल आएर भने विप्लव नेतृत्वमाथी लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । ...
दाङ,२० फागुन । प्रचण्ड दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले संसदीय दलको सचेतकबाट हटाउने निर्णय भनी गरेको निर्णयलाई सचेतक शान्ता चौधरीले चुनौती दिएकी छन् । पाहुना आएकाहरूले आफूलाई घरबाट जा भन्न नसक्ने उनको टिप्पणी छ । ‘हामी हाम्रो घारमा शानदार रूपमा बस्छौं । घरलाई सुन्दर बनाउँछौं । पाहुना हुन आएकाले हामीलाई जा भन्ने हैसियत राख्न सक्दैनन्,’ चौधरीले बुधवार फेसबूकमा लेखेकी छिन् । यसअघि प्रचण्ड–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र सचेतक चौधरीको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेको थियो । ...
विप्लव भोलि सार्वजनिक हुने, ओलीसँगै सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं, २० फागुन। प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव सार्वजनिक हुने भएका छन् । सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमति अनुसार, भोली एक समारोहबीच विप्लव सार्वजनिक हुने भएका हुन । दुबै पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । वार्ता टोलीहरुका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र खडक बहादुर विश्वकर्माले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन । बुधबार र बिहिबार विप्लव र सरकारका वार्ता टोलीबीच छलफल भएको थियो । भोली नै दुबै पक्षबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरिनेछ । विप्लव समूहले वार्ताको वातावरण बनाउन आफूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राखेको थियो । ...
2Mar By Rajmarg OnlineNo Comments
सरकारपछि विप्लव समूहले पनि बनायो वार्ता टोली
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको नेकपाले सरकारसँग वार्ताको लागि टोली गठन गरेको छ । उक्त समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र दीपक चलाउनेको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय टोली गठन गरिएको हो । मंगलबार सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको नेत्रित्वमा टोली गठन गरेको थियो । सरकारले विप्लव समूहको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । वार्ता गर्न टोली गठन गरे पनि प्रतिबन्ध फुकुवा भने अझैं गरेको छैन । ...
28Feb By Rajmarg OnlineNo Comments
अब नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्छ ? काँग्रेस निर्णायक, तर निर्णय गर्न बाँकी
दाङ, १६ फागुन। प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २३ गतेका लागि आह्वान भएसँगै अब नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्छ ? भन्ने चासो सुरु भएको छ । संसद पुर्नस्थापना भएसँगै आफुहरुले जितेको महसुस गरेका नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समुहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरुले भने तत्काल राजीनामा नदिने र सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने रणनिति बनाएका छन् । अबको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने मुख्य भूमिका काँग्रेसको देखिएको छ । काँग्रेसले जसलाई साथ दिन्छ, उही समूहले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था छ । काँग्रेस नेताहरुले भने औपचारिक रुपमा सरकारको बारेमा बोलिसकेका छैनन् । तर ओली पक्षका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने र यहि सरकारलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । ओली पक्षका नेता महेस बस्नेतले सर्वोच्चको फैसलासँगै वर्...
27Feb By Rajmarg OnlineNo Comments
काठमाडौं, १५ फागुन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जालझेल, छलकपटमात्रै बढि रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध शिक्षकहरूको शनिबार ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजित राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग फुटाउ र शासन गर भन्ने मात्रै नीति रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘ओलीले जेलमा बस्दा चाणक्य नीतिमात्रै पढे क्यारे, महाभारत र चाणक्य नीति पढ्या छ, अनि सकुनीको भूमिका खुब मन पर्दो रहेछ उनलाई, सकुनी सबभन्दा राम्रो पात्र उनको लागि, अहिले उनी सकुनीको भूमिकामा छन् हेर्नुहोस् ।’ प्रचण्डले विचारमा एकता भएपछि मात्र पार्टी एकता सम्भव हुने बताए । उनले भने, ‘फेरि केपी ओलीसँग समहति हुन सक्छ सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा सहमति कोसँग हुन्छ को...
२३ गते प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
दाङ, १५ फागुन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधि सभा अधिवेशन फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आउँदो २३ गते आइतबार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि शुक्रवार पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गएको पुस ५ गते राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै गएको मङ्गगलबार १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीवार बेलुका शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गर्नुभएको थियो । ...
26Feb By Rajmarg OnlineNo Comments
दाङ, १४ फागुन। प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले गत पुसदेखि रोकएको तलब÷सुविधा एकमुस्ट पाउने भएका छन् ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसद सचिवालयले सांसदहरुको तलब÷सुविधा रोकेको थियो । फागुन महिनाको तलब पठाउँदा पुसदेखि रोकिएको सबै तलब एकमुस्ट पठाइने संसद सचिवालयका सह–प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि यसअघि रोकिएको तलब सुविधा सांसदहरुले एकमुस्ट पाउने भएका हुन् । यसअघि संसदमा पश भएका विधेयक पनि दस्ताको तस्तै अगाडी बढने प्रवक्तारोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा भने खास एजेण्डा छैन । अधिवेशन डाकिएको जानकारी गराइएको राष्ट्रपतिको पत्र सभामुखले वाचन गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची बन्ने उहाँको भनाई छ । ...
महिला अधिकार रक्षा घरबाटै शुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीद्वारा शहिद परिवारलाई सम्मान
किवानिस क्लबले हातिढुंगामा शिव महोत्सव गर्ने